Naing Linn .3days ago
Naing Linn .4days ago
ဗီလာရီးယဲလ်ကွင်းမှာ အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်
အသင်းကြီးတွေ ရလဒ်ကောင်း ရယူဖို့ရှိနေတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် စနေနေ့ပွဲစဉ်များ
by Naing Linn .3weeks ago
စီးရီးအေပွဲစဉ်(၂) ဂျူဗင်တပ်စ် – နာပိုလီပွဲမှာ ဘယ်အသင်းအသာရသွားမလဲ
by Ko Kyue .3weeks ago
လာလီဂါပွဲစဉ်(၃)မှာ နိုင်ပွဲရဦးမယ့် ဘာစီလိုနာ
by Naing Linn .4weeks ago
လာလီဂါမှာ နိုင်ပွဲဆက်ဦးမယ့် ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်
၀ုလ်ဗ်ကွင်းမှာ ရုန်းကန်ရဖို့ရှိနေတဲ့ မန်ယူ